Ogaden News Agency (ONA) – Ilaalinta midnimada iyo shirqooladda cadawga
Ilaalinta midnimada iyo shirqooladda cadawga
Erayga Midnimo oo kamid ah erayadda JWXO waa eray aad loo qiimeeyo oo dhamaan shucuubta caalamku uu ka siman yihiin in aan la aantii guul la gaadhi karin nabad iyo colaadba labadaba wuxuu u yahay saldhig lagaga maarmaan ah. Umaddii doonaysa in ay ilaaliso midnimadeeda waa in ay leedahay meel ay ula noqoto oo kala saari karta haddii uu ku dhex yimaado khilaaf kala dhextaali kara midnimadooda gaar ahaan haddii ummadu dagaal kula jirto cadaw kusoo duulay oo ku qasbaya in ay xoojiyaan midnimadooda si ay iskaga caabiyaan cadawga kusoo duulay.
Shucuubta caalamka qaar waxay leeyihiin dhaqan iyo xeerar ay ayagu dajisteen qaarna qawaaniin ay ayagu dhigteen ay ku kala baxaan. Ummadda islaamka ee aynu ka tirsanahay ilahay wuxuu faray haddii ay isqabqabsadaan in ay ilahay iyo rasuulkiisa ula noqdaan arimaha khilaafkaas keenay. Akhristayaal Ilaahay arimaha uu baray dadka muslimiinta ah waxaa ka mid ah in muran iyo isqabqabsi uuna adhaxdooda imaanin oo sidaasi ayna ku waayin haybadii ay lahaayeen kadibna aynan u jabin cadawgooda oo ayna fashilmin.
Si haddaba looga hortago in la isqabqabsado arimahaas wuxuu ilaahay jideeyey nidaam wuxuuna amray in ay muslimiintu kala danbeeyn iyo ismaqal yeeshaan wuxuu ilaahay yiri adeeca ilaahinii idin abuuray, rasuulkiisana adeeca, kuwaad taladda u dhiibataana adeeca. Rasuulkii scw asagoo arimihii la faray fulinaaya ayuu muslimiintu u dagiyay nidaam ay ku dhaqmaan oo kuwii ka leexda ay danbiilayaal noqonayaan laguna qaadayo sharcigii uu ilaahay dajiyey.
Akhristayaal fowdada ka socota soomaaliya ee qaranimadoodii ay ku waayeen ee maanta gacanta ay uga wada galeen cadawgoodii Soomaaliyeed waa iyaga oon ku dhaqmin wadadii loo jideeyey inkastoo qaarkood lagu magacaabo in ay muslimiin yihiin hasayahaatee sheegasho iyo laab lakac toona diintu ma aha ilaahay agteedana qiimo kama laha ficiladeedu ee waxaa qiimo ka leh qalbigaa waxa ku jira oo aan si ikhlaas ah oogu dhaqano nidamka iyo kala danbaynta aad ayuu rasuulkii SCW u adkeeyay muslimiintana waxaa ka mid ahaa hadaladii rasuulka SCW qudbadiisii muslimiinta uu kula dardaarmaayey u jeediyey iska ilaaliya khilaafaad iyo kala jeedsanaan oo adeeca midka aad madaxnimada u doorataan xitaa haduu adoon ahaa waxaan la wada soconaa in rasuulkii SCW arinta kala qaybsanaanta uu si aad ah u adkeeyey wuxuu yiri xitaa hadday saddex safar aadaan waa in ay qof masuul ka dhigtaan si aynan u imaanin in lays garab yaaco iyo in uu qof walbo uu siduurabo yeelo. Akhristayaal isga oo Rasuulkii SCW ka digaya in ayna arintu sidasi noqonin ayuu dajiyey in haddii mid isgarab taago midka aan madaxtinimada u dooranay uu midkaa kale qoorta ka jaro rasuulkii SCW wuxuu ogaa in cadawga ummaddu uu ka faa’idaysanaayo haddii uu midkeenwala intuu koox meel kuxidho uu yiraahdo anaa idiinka amiir ah taariikhda ayeey ku xusan tahay dalal badan oo islaam ahaa in ay ku lumeen iyada oo ay oogu danbaysay soomaaliya maanta.
Akhristayaa haday jirto baahi loo qabo midnimada shacabka ogaadeeniya dad ooga baahan ma jiraan cidkasta oo aqli lehna way ogtahay maanta. su’aasha kali ah ee la iswaydiinkarana waxay tahay sideen ku dhisnaa midnimadeena sideese ooga ilaalinaa shirqoolada uu cadawgu maleegaayo maadaama uu hadalka cadawgu yaha qaybi oo xukun halganka aan kaga xorayneyno ummaddena gumaysiga madow ee qarnigan 21aad shucuubo faro ku tiris oo kali ah ku haddeen gunimadiisa wuxuu u baahan yahay wadajir taas oo ku imaan karta oo kali ah in qofkasta iska iloobo rabitaankiisa gaarka ah. Haddii uu shaqsi isla weeyn uu yiraahdo waxaan ahay gudoomiyaha ururka xaq ayaana u leeyahay in dalkayga u dagaalamo qofka oogu horeeya ee soo dhawaynaya waa gumaysiga waxaa hubaal ah waliba in uu barbaarinaayo kooxdaas. sababtoo ah waxay fulinayaan shaqsigan iyo kooxda uu hortaagan yahay mabda’ii gumaysiga oo ahaa bulshadda oo lakala qaybiyo koox kooxna layskaga horgeeyo si uu u sii dhayraysto xukunkiisa.
Akhristayaal madaama ayna diintu ogolayn kala qaybsanaanta iyo isgarab yaaca oo cadawga aan la dagaalameeyno uu ku dadaalayo sidii uu bulshadeena uu u kala qaybin lahaa ama uu si qabiil qabiil iskaga horkeeni lahaa sababtoo ah waxaynu ognahay in gumaysigu uu kala qaybiyo xooga iyo wadajirka bulshadeena mintidka ah iyo gumeeysi diidka ah miyayna ahayn xikmad iyo sharci in ciidanka JWXO talaabada ugu haboon ka qaadaan qofkii isku daya in arimaha noocaas ah ka fuliya dalka. Waxaa hubaal ah in uu halgankeenu gaadhay heer uu maquunin karo qof kasta oo isku daya in uu ugu garbeeyo cadawga kala qaybinta iyo ka hortaga naftood hurayaasha marxaladda uu halgankeenu maraayo waxaa lagaga maarmaan ah in shacabkeena halgamaaya ee dhibka halganka ku dhacaayo uu ka feejignaado shirqoolada uu cadawgu maleegayo waxaana ka mid ah shirqooladaa koox dan gaar ah wadata in bulshadda ay ku jahawareerinayso waxaa nahay ururka nooc ka mid ah halgankana qayb ka ah iyada oo u jeeddada loo soo hubeeyay ay tahay in ay iska horyimaadan oo ay isku dhacaan ciidanka JWXO si uu gumaysiga uga nasto xabadda naftood hurayaasha.
Haddaba si shirqooladaas loo fashiliyo waa in dadweeynaha iyo naftood hurayaasha oo isku duuban ay dawgiisa mariyaan qof kasta oo isku daya in uu hagardaamiya halganka oo intuu koox yar meel ku ooto uu yaraahdaa waxaan ahay halgamaa. Akhristayaal Hogaanka JWXO wuxuu ugu baaqay dhamaan somaalida ogaadeeniya in ay ka qayb galaan halganka xoriyad doonka ah oo ay ku soo biraan JWXO xubno firfircoona ay ka noqdaan JWXO isaga oo qof waliba ay gudanayaan waajibaadka ay dalkiisa iyo diintiisa ku leeyihiin. Ugu danbayntii Hogaanka JWXO mar uu wax ka xusaayay arimaha isaga oo ka turjumayay ficil ahaan in la ilaaliyo midnimada iyo dhalinteena naftooda u huray xaqiijinta xoriyadeena iyga oo ogsoon in uusan guulaysanayn haddii aan la ilaalinin midnimadeena iyo mintidnimadeena iyagoo kaashanaaya awaamiirta ilaahay iyo rasuulkiisii SCW in aana la kala dhantaalin midnimada ummaddeena oon la ogolaanin iska hor imaad iyo isgarab yaac toona taas oo faa’iido u ah cadawga dadka iyo diinta ayuu faray dhamaan naftood hurayaasha iyo shacabka ogaadeeniya in ay gaari karaan guusha kama danbaysta ah.